Mwari, inhoo uye inzvimbo yekupotera
“Musanzwira tsitsi vatengesi” (5)
“Ndichaimba nezvesimba renyu” (16)
Kumutungamiriri; mutinhimira unonzi, “Musaparadza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu.* Pakatumwa varume naSauro kuti vanogaririra Dhavhidhi pamba pake vachida kumuuraya.+ 59 Ndinunurei pavavengi vangu, haiwa Mwari wangu;+Ndidzivirirei pane vaya vari kundipandukira.+ 2 Ndinunurei pavanhu vanoita zvakaipa,Uye ndiponesei pavarume vanoita zvemhirizhonga.* 3 Onai! Vakandihwandira;*+Varume vakasimba vanondirwisaIni ndisina kupanduka kana kuita chivi,+ haiwa Jehovha. 4 Kunyange ndisina chandakatadza, vanomhanya vogadzirira kundirwisa. Simukai pandinoshevedzera muone. 5 Nekuti imi Jehovha Mwari wemauto, ndimi Mwari waIsraeri.+ Mukai muongorore marudzi ese. Musanzwira tsitsi vatengesi vese vakaipa.+ (Sera) 6 Vanodzoka manheru ega ega;+Vanohon’a* sembwa+ uye vanonyangira vachipoterera guta.+ 7 Onai zvinobuda mumiromo yavo;Miromo yavo yakaita semapakatwa,+Nekuti vanoti: “Ndiani ari kuteerera?”+ 8 Asi imi, haiwa Jehovha, muchavaseka;+Muchanyomba marudzi ese.+ 9 Haiwa imi Simba rangu, ndicharamba ndakakumirirai;+Nekuti Mwari ndiye nzvimbo yangu yekupotera.*+ 10 Mwari anondiratidza rudo rusingachinji achauya kuzondibatsira;+Mwari achaita kuti nditarise vavengi vangu ndavakunda.+ 11 Musavauraya, kuti vanhu vangu varege kukanganwa. Nesimba renyu itai kuti vadzungaire;Vawisirei pasi, haiwa Jehovha, nhoo yedu.+ 12 Nemhaka yechivi chemuromo wavo, shoko remiromo yavo,Ngavabatwe nekuzvikudza kwavo,+Nemhaka yekutuka uye kunyengera kwavanoita vachitaura. 13 Vapedzisei makatsamwa;+Vapedzisei, kuti varege kuvapozve;Itai kuti vazive kuti Mwari ari kutonga pakati paJakobho kusvikira kumigumo yenyika.+ (Sera) 14 Ngavadzoke manheru;Ngavahon’e* sembwa, uye ngavanyangire vachipoterera guta.+ 15 Ngavadzungaire vachitsvaga chekudya;+Musaita kuti vagute kana kuwana pekugara. 16 Asi kana ndiri ini ndichaimba nezvesimba renyu;+Mangwanani ndichataura ndichifara nezverudo rwenyu rusingachinji. Nekuti muri nzvimbo yangu yekupotera+Uye nzvimbo yangu yekutizira pandinenge ndichitambudzika.+ 17 Haiwa imi Simba rangu, ndichaimba ndichikurumbidzai,*+Nekuti Mwari ndiye nzvimbo yangu yekupotera, Mwari anondiratidza rudo rusingachinji.+
^ Kana kuti “vanoda zvekudeura ropa.”
^ Kana kuti “Vakahwandira mweya wangu.”
^ Kana kuti “Vanohukura.”
^ Kana kuti “Ngavahukure.”